Norway inochengeta miganhu yayo yakavharwa kudzivirira kupinza ma COVID-19 makesi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Norway inochengeta miganhu yayo yakavharwa kudzivirira kupinza ma COVID-19 makesi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Norway Kuputsa Nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Gurukota reNorway, Erna Solberg akazivisa kuti nyika inofanirwa kuchengetedza miganhu yayo pasi pesimba kuitira kudzivirira kupinzwa kwe Covid-19 kubva kunze kwenyika.
"Kuchine njodzi yezvirwere zvitsva… Nyaya dzehutachiona dzinobva kunze kwenyika ndiyo njodzi huru nhasi," Solberg akaudza paramende. "Saka zvakakosha kuchengetedza masimba."
Norway ine mimwe yeanorambidzwa zvakanyanya kufamba muEurope.
Norway haisi nhengo yeEU asi ndeyepasipoti-isina Schengen yekufamba nzvimbo. Vazhinji vasiri vagari, kusanganisira vashanyi, havasati vatenderwa kupinda munyika. Nekudaro, avo vanoshanda muzvikamu zvinoonekwa sezvakakosha, senge zvekurima kana mafuta, uye vanhu vanogona kuratidza hukama hwemhuri neNorway, vanogona kuenda ikoko. Ivo vanofanirwa kuve neanosvitsa mazuva gumi.
Vanhu vanobva kumhenderekedzo yeSweden havatenderwe kupinda munyika, vachipihwa huwandu hwakanyanya hwehutachiona imomo.